အောင်မြင်သူတွေ ဘယ်တော့မှ မလုပ်တဲ့အရာ (၅)ခု – Gentleman Magazine
အောင်မြင်တဲ့သူတွေမှာ သာမန်သူတွေနဲ့ မတူကွဲပြားတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါတွေကလည်း လျို့ဝှက်ထားတဲ့အရာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့က အခြားသူတွေလျှောက်တဲ့လမ်းအတိုင်း လျှောက်ပြီး ထူးမခြားနားလမ်းကို မလိုက်ကြပါဘူး။ အောင်မြင်မှုအတွက် နည်းလမ်းတွေ၊ အတုယူစရာတွေ အများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့အရာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ အောင်မြင်သူတွေ ဘယ်တော့မှမလုပ်တဲ့အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ အခြားသူတွေကို အပြစ်တင်တာ….
အောင်မြင်သူတွေဟာ သူတို့ဘ၀မှာ တွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ အခက်အခဲတွေအတွက် အခြားဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မတင်တတ်ကြပါဘူး။ သင့်ပြဿနာတွေအတွက် အခြားသူတွေကို အပြစ်တင်တာဟာ သင့်ဆီက စွမ်းအားတွေကို သူတို့ဆီကို စီးဆင်းခွင့်ပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ ဒီလိုအပြစ်တင်နေလို့လည်း အရာအားလုံး ပြေလည်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အပြစ်မတင်တော့ဘူးဆိုရင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တာဝန်ယူဖြေရှင်းတတ်လာရုံသာမက ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ပြီး ရောက်ချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဆီကို မောင်းနှင်သွားနိုင်မှာပါ။
၂။ ပြောင်းလဲဖို့ ခေါင်းမာတာ….
အပြောင်းအလဲဆိုတာ ရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်သလို တိုးတက်မှုရှိဖို့အတွက် လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို အောင်မြင်သူတွေက နားလည်ကြပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ပြောင်းလဲမှုမလုပ်ရင် နောက်ပြန်သွားနေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ပြောင်းလဲစရာရှိလာရင် အတ္တနဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ကို စွန့်လွှတ်ပြီး အလေ့အကျင့်နဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ ဒီလိုဆိုရင် ဘ၀မှာနောက်ထပ်အောင်မြင်မှု တဆင့်ကို တက်လှမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့် ရှေ့မဆက်နိုင်တာ….
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာ စိုးရိမ်စိတ်တွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကန့်သတ်ထားတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ အောင်မြင်သူတွေကတော့ အဲ့ဒါတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒီအချက်က ကမ္ဘာမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့ အောင်မြင်ချင်ပေးမယ့် မအောင်မြင်နိုင်သူတွေကြားထဲက အကြီးမားဆုံး ကွာခြားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ကျော်လွှားချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ဘ၀အဘိဓာန်ထဲမှာ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စကားကို လုပ်နိုင်တယ်လို့ အရင်ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေက ယုတ္တိရှိရဲ့လား။ တကယ်ရော ဖြစ်လာနိုင်လို့လား သေချာစဉ်းစားပါ။
၄။ အကူအညီတောင်းဖို့ ရှက်ကြောက်တာ…..
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာ မာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေရှိကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မာနက ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ကြားမှာ ခြားထားတဲ့ မှန်တစ်ချပ်လိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့က အချိန်တိုအတွင်းမှာ အလုံးစုံကို တတ်သိနားလည်သွားဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီအခါမှာ ကိုယ့်ထက်အတွေ့အကြုံရှိသူတွေ၊ ၀ါရင့်နားလည်သူတွေဆီကနေ အကူအညီရယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို အကူအညီမတောင်းတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ အောင်မြင်မှုကို မြင်နေရပြီး တပ်ခေါက်လှည့်ပြန်သွားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ အကူအညီတောင်းတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
၅။ အကောင်းဆုံးအချိန်ကို စောင့်နေတာ….
တစ်ခုခုလုပ်ဖို့အတွက် အချိန်ကောင်းကို စောင့်တာက အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်လို့ ထင်ရပါမယ့် သေခြင်းတရားအကြောင်း စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိတဲ့အချိန်က အကန့်အသတ်ရှိတဲ့အတွက် စောင့်နေလို့ မရပါဘူး။ အောင်မြင်သူတွေကတော့ လက်ရှိအချိန်ထက် ပိုကောင်းတာမရှိဘူးဆိုတာကို နားလည်ကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အခုအချိန်က အကောင်းဆုံး အသင့်တော်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ လောကကြီးကလည်း အကောင်းဆုံးမဟုတ်တဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သူတွေကို မျက်နှာသာပေးတတ်ပါတယ်။ သင် စောင့်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာလို့ မလုပ်သေးတာလဲဆိုတာကို ဆင်ခြေပေးစရာရှိနေမှာပါ။ အကောင်းဆုံးအချိန်ဆိုတာ သင့်စိတ်ကူးထဲမှာပဲ ရှိပါတယ်။ ပြင်ပလောကကြီးရဲ့ သဘောသဘာဝကိုက ဘယ်အရာမှ ပြီးပြည့်စုံကောင်းမွန်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
အောငျမွငျသူတှေ ဘယျတော့မှ မလုပျတဲ့အရာ (၅)ခု
အောငျမွငျတဲ့သူတှမှော သာမနျသူတှနေဲ့ မတူကှဲပွားတာတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ဒါတှကေလညျး လြို့ဝှကျထားတဲ့အရာတှေ မဟုတျပါဘူး။ သူတို့က အခွားသူတှလြှေောကျတဲ့လမျးအတိုငျး လြှောကျပွီး ထူးမခွားနားလမျးကို မလိုကျကွပါဘူး။ အောငျမွငျမှုအတှကျ နညျးလမျးတှေ၊ အတုယူစရာတှေ အမြားကွီးရှိတဲ့အထဲကမှ ရှောငျရှားသငျ့တဲ့အရာတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဒါတှကေတော့ အောငျမွငျသူတှေ ဘယျတော့မှမလုပျတဲ့အရာတှေ ဖွဈပါတယျ။
၁။ အခွားသူတှကေို အပွဈတငျတာ….
အောငျမွငျသူတှဟော သူတို့ဘဝမှာ တှကွေုံ့ရတဲ့အခွအေနနေဲ့ အခကျအခဲတှအေတှကျ အခွားဘယျသူ့ကိုမှ အပွဈမတငျတတျကွပါဘူး။ သငျ့ပွဿနာတှအေတှကျ အခွားသူတှကေို အပွဈတငျတာဟာ သငျ့ဆီက စှမျးအားတှကေို သူတို့ဆီကို စီးဆငျးခှငျ့ပေးလိုကျသလိုပါပဲ။ ဒီလိုအပွဈတငျနလေို့လညျး အရာအားလုံး ပွလေညျသှားမှာမဟုတျပါဘူး။ အပွဈမတငျတော့ဘူးဆိုရငျ ကိုယျတိုငျကိုယျကြ တာဝနျယူဖွရှေငျးတတျလာရုံသာမက ကိုယျ့ဘဝကို ကိုယျကိုယျတိုငျ ထိနျးခြုပျပွီး ရောကျခငျြတဲ့ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျဆီကို မောငျးနှငျသှားနိုငျမှာပါ။
၂။ ပွောငျးလဲဖို့ ခေါငျးမာတာ….
အပွောငျးအလဲဆိုတာ ရှောငျလှဲလို့မရနိုငျသလို တိုးတကျမှုရှိဖို့အတှကျ လိုအပျတယျဆိုတာကို အောငျမွငျသူတှကေ နားလညျကွပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ ပွောငျးလဲမှုမလုပျရငျ နောကျပွနျသှားနတောနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ပွောငျးလဲစရာရှိလာရငျ အတ်တနဲ့ စိုးရိမျစိတျကို စှနျ့လှတျပွီး အလအေ့ကငျြ့နဲ့ ယုံကွညျမှုတှကေို ပွောငျးလဲလိုကျပါ။ ဒီလိုဆိုရငျ ဘဝမှာနောကျထပျအောငျမွငျမှု တဆငျ့ကို တကျလှမျးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
၃။ စိုးရိမျစိတျကွောငျ့ ရှမေ့ဆကျနိုငျတာ….
ကြှနျတျောတို့ အားလုံးမှာ စိုးရိမျစိတျတှေ၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ကနျ့သတျထားတဲ့ ယုံကွညျမှုတှေ ရှိပါတယျ။ အောငျမွငျသူတှကေတော့ အဲ့ဒါတှကေို ကြျောဖွတျနိုငျကွပါတယျ။ ဒီအခကျြက ကမ်ဘာမှာ အောငျမွငျကြျောကွားသူတှနေဲ့ အောငျမွငျခငျြပေးမယျ့ မအောငျမွငျနိုငျသူတှကွေားထဲက အကွီးမားဆုံး ကှာခွားမှုဖွဈပါတယျ။ ဒီအခကျြကို ကြျောလှားခငျြတယျဆိုရငျ သငျ့ဘဝအဘိဓာနျထဲမှာ မလုပျနိုငျဘူးဆိုတဲ့ စကားကို လုပျနိုငျတယျလို့ အရငျပွငျရမှာဖွဈပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ စိုးရိမျစိတျတှကေ ယုတ်တိရှိရဲ့လား။ တကယျရော ဖွဈလာနိုငျလို့လား သခြောစဉျးစားပါ။
၄။ အကူအညီတောငျးဖို့ ရှကျကွောကျတာ…..
ကြှနျတျောတို့ အားလုံးမှာ မာနနဲ့ပတျသကျတဲ့ ပွဿနာတှရှေိကွပါတယျ။ ဒီနရောမှာ မာနက ဘာနဲ့တူလဲဆိုရငျ အောငျမွငျမှုပနျးတိုငျနဲ့ ကြှနျတျောတို့ကွားမှာ ခွားထားတဲ့ မှနျတဈခပျြလိုပါပဲ။ ကြှနျတျောတို့က အခြိနျတိုအတှငျးမှာ အလုံးစုံကို တတျသိနားလညျသှားဖို့ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ ဒီအခါမှာ ကိုယျ့ထကျအတှအေ့ကွုံရှိသူတှေ၊ ၀ါရငျ့နားလညျသူတှဆေီကနေ အကူအညီရယူဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒီလို အကူအညီမတောငျးတတျဘူးဆိုရငျတော့ အောငျမွငျမှုကို မွငျနရေပွီး တပျခေါကျလှညျ့ပွနျသှားရပါလိမျ့မယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ လိုအပျတဲ့အခြိနျမှာ အကူအညီတောငျးတတျဖို့ လိုပါတယျ။
၅။ အကောငျးဆုံးအခြိနျကို စောငျ့နတော….
တဈခုခုလုပျဖို့အတှကျ အခြိနျကောငျးကို စောငျ့တာက အဓိပ်ပါယျရှိတယျလို့ ထငျရပါမယျ့ သခွေငျးတရားအကွောငျး စဉျးစားကွညျ့ပါ။ ကြှနျတျောတို့မှာ ရှိတဲ့အခြိနျက အကနျ့အသတျရှိတဲ့အတှကျ စောငျ့နလေို့ မရပါဘူး။ အောငျမွငျသူတှကေတော့ လကျရှိအခြိနျထကျ ပိုကောငျးတာမရှိဘူးဆိုတာကို နားလညျကွပါတယျ။ ဟုတျပါတယျ။ အခုအခြိနျက အကောငျးဆုံး အသငျ့တျောဆုံးအခြိနျဖွဈပါတယျ။ လောကကွီးကလညျး အကောငျးဆုံးမဟုတျတဲ့အခြိနျမှာ ဖွဈအောငျလုပျနိုငျသူတှကေို မကျြနှာသာပေးတတျပါတယျ။ သငျ စောငျ့နဦေးမယျဆိုရငျတော့ ဘာလို့ မလုပျသေးတာလဲဆိုတာကို ဆငျခွပေေးစရာရှိနမှောပါ။ အကောငျးဆုံးအခြိနျဆိုတာ သငျ့စိတျကူးထဲမှာပဲ ရှိပါတယျ။ ပွငျပလောကကွီးရဲ့ သဘောသဘာဝကိုက ဘယျအရာမှ ပွီးပွညျ့စုံကောငျးမှနျနတော မဟုတျပါဘူး။
Previous: အပြာကား စွဲလမ်းမှုကို ဘယ်လိုကုစားမလဲ
Next: သင့် ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်မသိနိုင်သေးတဲ့ အချက်များ